९९ प्रतिशत चालकलाई ट्राफिक नियम थाहा छैन: वसन्त पन्त, एसएसपी (भिडियोसहित)
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख तथा एसएसपी वसन्त पन्तले ९९ प्रतिशत सवारी चालकलाई ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् । विकसित देशबाट आएकालाई विमानस्थलमै सवारीसाधन दिए मात्रै ट्राफिक नियम पालना गर्ने वताउँदै पन्तले भने, ‘उनीहरू पनि एकसाता बसेपछि नियम बिर्सन्छन् ।’केन्द्रबिन्दु मिडियाले आयोजना गरेको १४ औं नाडा अटो विशेष राउण्ड टेवलमा बोल्दै एसएसपी पन्तले घरघरमा पुगेर ट्राफिक नियम पढाउँदा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।एसएसपी पन्तको भनाइ जस्ताको तस्तै विकसित देशमा पुगेर आएकालाई एयरपोर्टमा सवारी दिए पालना गर्छन् । जब ७ दिन यहाँ बस्छन् उनीहरूले पनि त्यही गर्छन् । ट्राफिक नियम पालन गर्दैनन् । तसर्थ सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । गाडी लिएर सडकमा आउने सबैले नियम ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर हामीकहाँ लेन थाहा नहुनेले समेत लाइसेन्स लिएर गाडी चलाइरहेका छन् ।काठमाडौँमा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप छ । प्रहरी कार्यालयमा हजारौंको संख्यामा बेवारिसे साधन थुप्रिएका छन् । अवस्था डरलाग्दो छ । तर सवारीधनीहरू आफ्ना सवारी साधन लिन आउँदैनन् । हामी फलो गर्छाैं त्यतिबेला उनीहरू लिन आउँछु भन्छन् तर आउँदैनन् । किन लिन आउँदैनन् त ?सवारीधनीहरू आफ्ना साधन लामो समयसम्म नवीकरण गर्दैनन् , लामो अवधिमा त्यो साधनको तिर्नुपर्ने रकम धेरै भइसक्छ उता सवारीसाधन भने पुरानो भइसक्छ । अनि त्यो नवीकरण गर्नुभन्दा छाडिदिनु सस्तो पर्छ । ट्राफिक प्रहरीले अस्ति मात्रै २ हजार सवारी साधन भन्सारमा बुझायो । अझै ६ हजार बाँकी छन् । अफिस कुरुप बनिसकेको छ । यस्तो भएपछि समस्या हुँदैन ?कुनै व्यक्तिलाई सवारीसाधन दिनुअघि सवारीसाधन अनुमति पत्र छ कि छैन । पछिसम्म प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने भनेर हेर्नुपर्छ । सवारी चालकहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ । काठमाडौँको सडक सवारीसाधन धेरै भएर मात्र अस्तव्यस्त भएको होइन । अहिलेकै सडकले ५० वर्षसम्म धान्नसक्छ तर प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।अब स्मार्ट ट्राफिक लाइट ल्याइँदै छ । यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन हुने क्रममा छ । भौतिक पूर्वाधारलाई बढाउने, जक्सन मेनेज गर्ने, चालकलाई अनुशासनमा राख्नेजस्ता कार्यमा ट्राफिक प्रहरी तदारुकताका साथ लागेको छ । हामीले घरघरमा गएर जनचेतना फैलायाैँ, ४० हजारलाई सडकमै पढायाैँ । के यसरी नै सधैँभरि पढाइरहने ? एउटै व्यक्तिलाई एउटै कुरा कतिचोटि अर्थ्याउने ? जबसम्म हरेक व्यक्तिमा मैले सडक नियम पालन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आउँदैन तबसम्म ट्राफिक व्यवस्था सुध्रन गाह्रो छ ।एक त काठमाडौंमा बाटै अप्ठेरो छ, त्यसमाथि चालकहरू अलिकति जाम हुनेबित्तिकै हर्न बजाउन थाल्छन्, कामकाजीहरू आफू घरबाट अफिस पुग्न कति जक्सन पार गर्नुपर्छ त्यो ख्याल गर्दैनन्, पछाडिको चालकलाई वास्ता गर्दैनन्, अनि हुँदैन त समस्या ? भन्ने नै हो भने नेपालका ९९ प्रतिशत चालकलाई ट्राफिक नियम थाहा छैन ।ट्राफिक जरिवानास्वरूप गत वर्ष मात्र ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो । जहाँ यस्तो राजस्व शून्य हुन्छ त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्था पनि राम्रो हुन्छ । भनेपछि हामीकहाँको ट्राफिक व्यवस्थामा समस्या छ । समस्या हटाउन जरिवानाको रकम बढाउनुपर्छ । जबसम्म जरिवानाको डर देखाएर नियममा बाँध्न सकिन्न तबसम्म चुनौती रहन्छ ।थप भिडियोमा
९ भाद्र २०७६, सोमबार १४:४२
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख तथा एसएसपी वसन्त पन्तले ९९ प्रतिशत सवारी चालकलाई ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् । विकसित देशबाट आएकालाई विमानस्थलमै सवारीसाधन दिए मात्रै ट्राफिक नियम पालना गर्ने वताउँदै पन्तले भने, ‘उनीहरू पनि एकसाता बसेपछि नियम बिर्सन्छन् ।’
केन्द्रबिन्दु मिडियाले आयोजना गरेको १४ औं नाडा अटो विशेष राउण्ड टेवलमा बोल्दै एसएसपी पन्तले घरघरमा पुगेर ट्राफिक नियम पढाउँदा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।
एसएसपी पन्तको भनाइ जस्ताको तस्तै
विकसित देशमा पुगेर आएकालाई एयरपोर्टमा सवारी दिए पालना गर्छन् । जब ७ दिन यहाँ बस्छन् उनीहरूले पनि त्यही गर्छन् । ट्राफिक नियम पालन गर्दैनन् । तसर्थ सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । गाडी लिएर सडकमा आउने सबैले नियम ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर हामीकहाँ लेन थाहा नहुनेले समेत लाइसेन्स लिएर गाडी चलाइरहेका छन् ।
काठमाडौँमा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप छ । प्रहरी कार्यालयमा हजारौंको संख्यामा बेवारिसे साधन थुप्रिएका छन् । अवस्था डरलाग्दो छ । तर सवारीधनीहरू आफ्ना सवारी साधन लिन आउँदैनन् । हामी फलो गर्छाैं त्यतिबेला उनीहरू लिन आउँछु भन्छन् तर आउँदैनन् । किन लिन आउँदैनन् त ?
सवारीधनीहरू आफ्ना साधन लामो समयसम्म नवीकरण गर्दैनन् , लामो अवधिमा त्यो साधनको तिर्नुपर्ने रकम धेरै भइसक्छ उता सवारीसाधन भने पुरानो भइसक्छ । अनि त्यो नवीकरण गर्नुभन्दा छाडिदिनु सस्तो पर्छ । ट्राफिक प्रहरीले अस्ति मात्रै २ हजार सवारी साधन भन्सारमा बुझायो । अझै ६ हजार बाँकी छन् । अफिस कुरुप बनिसकेको छ । यस्तो भएपछि समस्या हुँदैन ?
कुनै व्यक्तिलाई सवारीसाधन दिनुअघि सवारीसाधन अनुमति पत्र छ कि छैन । पछिसम्म प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने भनेर हेर्नुपर्छ । सवारी चालकहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ । काठमाडौँको सडक सवारीसाधन धेरै भएर मात्र अस्तव्यस्त भएको होइन । अहिलेकै सडकले ५० वर्षसम्म धान्नसक्छ तर प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अब स्मार्ट ट्राफिक लाइट ल्याइँदै छ । यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन हुने क्रममा छ । भौतिक पूर्वाधारलाई बढाउने, जक्सन मेनेज गर्ने, चालकलाई अनुशासनमा राख्नेजस्ता कार्यमा ट्राफिक प्रहरी तदारुकताका साथ लागेको छ । हामीले घरघरमा गएर जनचेतना फैलायाैँ, ४० हजारलाई सडकमै पढायाैँ । के यसरी नै सधैँभरि पढाइरहने ? एउटै व्यक्तिलाई एउटै कुरा कतिचोटि अर्थ्याउने ? जबसम्म हरेक व्यक्तिमा मैले सडक नियम पालन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आउँदैन तबसम्म ट्राफिक व्यवस्था सुध्रन गाह्रो छ ।
एक त काठमाडौंमा बाटै अप्ठेरो छ, त्यसमाथि चालकहरू अलिकति जाम हुनेबित्तिकै हर्न बजाउन थाल्छन्, कामकाजीहरू आफू घरबाट अफिस पुग्न कति जक्सन पार गर्नुपर्छ त्यो ख्याल गर्दैनन्, पछाडिको चालकलाई वास्ता गर्दैनन्, अनि हुँदैन त समस्या ? भन्ने नै हो भने नेपालका ९९ प्रतिशत चालकलाई ट्राफिक नियम थाहा छैन ।
ट्राफिक जरिवानास्वरूप गत वर्ष मात्र ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो । जहाँ यस्तो राजस्व शून्य हुन्छ त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्था पनि राम्रो हुन्छ । भनेपछि हामीकहाँको ट्राफिक व्यवस्थामा समस्या छ । समस्या हटाउन जरिवानाको रकम बढाउनुपर्छ । जबसम्म जरिवानाको डर देखाएर नियममा बाँध्न सकिन्न तबसम्म चुनौती रहन्छ ।
ट्राफिक प्रहरी, वसन्त पन्त
Prevचितवनमा प्रहरी र रविका समर्थकबीच झडप, अश्रुग्यास प्रहार
नाडा अटो शो: कुन बैंकले कतिमा दिँदै छ अटो लोन ?Next
ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकललाई कारवाही अभियान
जब यात्रु बनेर गएका ट्राफिक प्रहरी नै ठगीमा परे…!
ट्राफिक प्रहरीलाई पिपिइ सहयोग
ट्राफिक प्रहरीलाई कार्यस्थलमै स्वास्थ्य सामग्री वितरण
ट्राफिक प्रहरी आफैँ यात्रु बन्दा…!